Mbola mijanona ho ‘takalon’aina politika’ any am-ponjan’i Qarchak, Iran i Kylie Moore-Gilbert, akademika any Melbourne · Global Voices teny Malagasy
Tsy nahavita namoaka ilay akademika ny diplaomasia mangingina
Voadika ny 13 Aogositra 2020 5:05 GMT
Vakio amin'ny teny русский, Español, Italiano, Français, Ελληνικά, English
Antsafa nataon'i Kylie Moore-Gilbert niaraka tamin'ny The Modern Middle East Oktobra 2017- Pikantsary.
Nisarika ny sain'izao tontolo izao ny nanjo ilay akademika avy ao amin'ny oniversiten'i Melbourne Kylie Moore-Gilbert noho ny famindrana azy ho any amin'ny fonjan'i Qarchak malaza ratsy any Tehran, Iran.
Malaza ratsy noho ny fepetra ara-pahasalamana sy ara-piarovana ny ao Qarchak. Tojo tsy fahasalamana i Kylie ary ketraka ara-tsaina. Miatrika ny mety hifindran'ny COVID-19 ihany koa izy.
Mizaka ny zom-pirenena Aostraliana sy Britanika i Kylie izay voaheloka higadra 10 taona an-tranomaizina tamin'ny taona 2018 noho ny voalaza fa fitsikilovana. Notazonina ho tsiambaratelo virtoaly nandritra ny herintaona ny famonjana azy izay anisan'ny paikadin'ny governemanta Aostraliana amin'ny diplaomatika mangina. Tsy naharitra tamin'ity paikady ity ny sasany tamin'ireo mpiara-miasa taminy ary namoaka ny fanangonan-tsonia nitaky ny governemanta Aostraliana sy ny oniversite hiasany mba hanao fanentanana mavitrika ampahibemaso.
Nisioka i Jason Rezaian, Iraniana Amerikana, izay navotsotra tamin'ny volana Janoary 2016 tamin'ny fifanarahana ara-diplaomatika taorian'ny dimy ambin'ny folo volana an-tranomaizina noho ny fiampangana fitsikilovana:
Mampahonena fa tsy nahomby izay nataon'ireo governemanta ao Aostralia sy ao amin'ny Fanjakana Britanika mba hanafahana ny olom-pireneny, Kylie Moore-Gilbert any am-ponja ao Iran. Tokony ho afahana io vehivavy tsy manantsiny io. Tena ampijaliana ireo teratany vahiny vitsivitsy izay voatazona ho takalon'aina ao Iran.
Mbola mitana ny tsy faha-melohany i Moore-Gilbert saingy nilaza izy fa mikasa ny haka azy hiasa ao aminy ny sampam-pitsikilovana Iraniana ho takalon'ny fahalalahany.
Manaraka akaiky ity raharaha ity ny Radio Zamaneh, anisan'ny fikambanan'ny fampitam-baovao amin'ny fiteny Farsi ‘manohana ny ezaka ataon'ireo mpikatroky ny zon'olombelona sy ny fiarahamonim-pirenena ao Iran':
Nilaza tamin'ny Zamaneh i Azadeh Dawachi, mpikaroka ao amin'ny Oniversite Deakin any Melbourne sady namana sy mpiara-miasa amin'i Kylie Moore-Gilbert fa olona tena tony izy ary tsy azo inoana ho an'ireo mahalala azy tsara ny fiampangana azy.
… Mpikaroka amin'ny sehatry ny finoana Islamo izy ary mpampianatra amin'ny fampianarana Islamika ao amin'ny Oniversite Melbourne. Momba ny Shiita Bahraini sy ny hetsika izay misy ao amin'ny faritra ny fikarohana nataony. Miteny Arabo tsara izy ary nandeha tany Iran taona vitsy lasa izay mba hanao fikarohana momba ny Shiita sy ny Islamo. Niverina tsy nisy olana izy.
Nitaky ny fanaovana hetsika bebe kokoa sy ny fanafoanana ny tsiambaratelo misimisy kokoa ny namana sy mpiara-miasa iray hafa, Jessie Moritz tao amin'ny lahatsoratra iray tao amin'ny The Conversation:
Nangina aho satria nanantena fa hanafaka azy ny paikady ara-diplaomatika mangina. Saingy sarotra ny manadino fa mampivarahontsana tokoa ny fivoarana tamin'ity herinandro ity. Mila manao zavatra bebe kokoa i Aostralia.
Nitondra fivoarana ny fanambarana farany momba ny zava-nitranga taminy niaraka tamin'ny ambasadaoro Aostraliana izay nampanantena ny fitsidihana an'i Kylie. Nisioka ny kaonty Twitter @FreeKylieMG:
Faly izahay nahare ny vaovao fa hitsidika an'i Kylie ny ambasadaoro Aostraliana Lyndall Sachs izay antenaina ho rahampitso. Fantatray fa mety mitaky fotoana ny fifampiraharahana amin'ny famoahana azy, saingy misy ny fitakiana tsy azo iadian-kevitra izay tsy maintsy ataon'ny governemanta Aostraliana ANDROANY.
Niresaka tao amin'ny fandaharana Sakafo Marainan'ny Radiom-pirenena ABC i Xuyie Wang, Shinoa Amerikana iray hafa navotsotra tamin'ny taona 2019 tao anatin'ny fifanakalozana gadra rehefa nigadra nandritra ny telo taona tao Iran. Hitany fa “atao takalon'aina politika” i Kylie mba hanaovana fifanarahana toy ny fifanakalozana. Nambarany fa «ilaina araka izay azo atao ny fisarihana ny sain'ny vahoaka» amin'izany tranga izany.
Nizara tao amin'ny Facebook i Reza Khandan, mpikatroky ny zon'olombelona sady vadin'i Nasrin Sotoudeh izay nogadraina noho ny fiarovany ny zon'olombelona tany Iran fa “nafindra i Kylie mba ho fanasaziana azy”. Nosoratany fa nandritra ny antso nataony avy any am-ponja dia nilaza izy fa tena ratsy ny fomba fitondrana ao amin'ny fonja. “Tsy afaka mihinana na inona na inona aho … tsy fantatro … diso fanantenana loatra aho … Tena … ketraka aho …”.
Nampian'i Khandan fa ao amin'ny toerana fanokana-monina ao amin'ny fonjan'i Qarchak no hitànana ireo gadra noho ny antony samihafa, ao anatin'izany ny famonoana olona, ​​ny zava-mahadomelina ary ny heloka bevava ara-bola. Misy ihany koa ny mararin'ny COVID-19 marobe ao amin'ny efitra fanokana-monina ao amin'ny fonja.
Nanatotosa antsafa niaraka tamin'i Kylie tamin'ny volana Oktobra 2017 ny fandaharam-baovao amin'ny fahitalavitra Modern Middle East (Afovoany Atsinanana Maoderina). Nisy dikany lehibe niaraka tamin'ny fandanjalanjana ny teny nataony, ny fisaintsainany momba ny diany mialoha ny Lohataona Arabo tany amin'ny faritra ny zavatra nambarany: “Somary marin-toerana kokoa raha oharina amin'ny ankehitriny ny Afovoany Atsinanana.”